नारायणी अस्पताल सप्लायर्सले रासन दिन नसक्ने भनेपछि समस्या - शैली न्युज
काठमाडौं । बिरगंजस्थित नारायणी अस्पतालमा रासन सप्लाई गर्दै आएका नगनारायण गुप्ताले रासन सप्लाई गर्न नसक्ने बताएका छन् । गत चैत्रदेखीनै रासन सप्लाई गर्दै आएको र २० लाख बक्यौता रकम पुगीसकेको भन्ै उनले रासन सप्लाई गर्न नसक्ने जानकारी गराएका हुन् ।
उनले भने ‘मैले पनि सामान अरुसँग खरिद गरेर दिने हो, अस्पतालबाट पाउनुपर्ने रकम २० लाख पुगिसकेको छ । घर बेचेर सामान दिन सकिंदैन । निषेधाज्ञाको समयमा घर धान्न मुस्किल पर्ने समयमा अस्पतालमा कुनै सामानको कमी हुन नदिएको भएपनि अस्पतालले सामानको पैसा भुक्तानी नगरेको उनले बताए ।
मंगलबार बिहान नारायणी अस्पतालका डा. उदयनारायण सिंहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै भनेका छन्, नारायणीको कोभिड किचेनमा बिरामीहरुका लागि खाना पाक्ने गर्छ ।
रासन सप्लाई गर्ने जिम्मेवारी पाएका महानुभावले एक्कासी भोलिबाट रासन दिन्न भन्छन्, बक्यौता रकम रहेछ भने लेखाले क्लियर गर्छ भन्दा पनि सहयोग नगर्ने मनसाय भएकालाई के भन्ने ? सहयोगीहरुसँग एक पटक फेरि सहयोगको अपेक्षा छ । कोभिड विरुद्धको यो लडाइँ अवश्य जित्नेछौं ।’
नारायणीमा एक सय जना कोभिडका बिरामी उपचाररत छन् । उपचारमा खटिने चिकित्सक नर्सलगायत कर्मचारी पनि सयकै हाराहारीमा हुन्छन् । उनीहरु सबैलाई अस्पतालले नै खानाको प्रबन्ध मिलाएको छ ।
अस्पतालमा बिरामी र चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीलगायत कर्मचारीका लागि गरी दुईवटा भान्सा चलिरहेको छ ।